दक्षिण कोरियामा ठ’गी धन्दा भोईस फिसिङ बढदो,फस्दैछन नेपालीहरु ! – Korea Pati
January 2, 2022 January 2, 2022 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on दक्षिण कोरियामा ठ’गी धन्दा भोईस फिसिङ बढदो,फस्दैछन नेपालीहरु !
दक्षिण कोरियामा भ्वाईस फिसिङकाे केस दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।यस्ता आपराधिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा नेपालीहरु पनि फसेका छन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यस्ता घटना बाट बच्न सन्देशमुलक प्रचारप्रसार पनि गरिएता पनि ह्याकरहरुले नौलो नौलो उपाय अपनाउँदै ठगी गर्दै आएको छ।
विशेष स्रोतका अनुसार हालसालै यस्तो घटना घटेको थियो।
नमस्ते :- नेपाल बाट एक परिचित व्यक्ति वा कुनै चिनजान व्याक्तिको मार्फत कोरियामा फोन आउँछ अनि भन्छ
मैले फलानो व्यक्ति सँग पैसा लिनुपर्ने छ तपाईंको बैंक एकाउन्ट उसलाई(तेश्रो व्यक्ति) दिन्छु अनि उसले तपाईंको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ कृपया त्यो रकम आए पछि नेपाल पठाइदिनुहोस् न ।
कोरियामा बस्ने नेपाली :- सामान्य सहयोग सम्झेर हुन्छ भन्छ।
जब पैसा आउँछ त्यो पैसा कोही व्यक्तिको नाम बाट पक्कै आउँछ तर त्यो पैसा वैधानिक नभई कोरियनको एकाउन्ट ह्याक गरी अवधैनिक माध्यम बाट तपाईंको एकाउन्टमा आउँछ ।
बिना स्रोत आएको रकम प्रयोग ह्याकरहरुले नै प्रयोग गर्छन र अन्त्यमा कानुन अनुसार फस्ने बीचको एकाउन्ट होल्डर जो त्यो ह्याकर सँग कुनै सम्बन्ध पनि हुँदैन ,अन्जान बस आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिन्छ वास्तव उ निर्दोष हुन्छ तर कानुन अनुसार दोषी ठहरिन्छ । यस्ता गतिविधि कोरियामा अहिले निरन्तर बढिरहेको तथ्याङ्कमा पनि बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यस्ता घटना बाट बच्न सन्देशमुलक प्रचार प्रसार पनि गरिएको थियो आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अन्य तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउँदा तेस्रो पक्ष वास्तवमै विश्वासिलो हो या होइन त्यो निर्क्योल गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न जरुरत छ।
फिसिङ के हो?
फिसिङ एक घोटाला अभ्यास हो जसद्वारा चोरहरूले सेवाका प्रयोगकर्ताहरूबाट व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्छन्। फिसिङ इमेलहरूको सहायताले ह्याकरले प्रयोगकर्तालाई कल गर्छ र पासवर्ड र सम्पर्कहरू जस्ता जानकारीहरू सोध्छ, जुन तिनीहरूको आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग गरिन्छ।
2. फिसिङ एक आपराधिक गतिविधि हो आफ्नो व्यक्तिगत डाटा चोरी को लागी
फिसिङ एउटा सामान्य घोटाला हो जसमा सामान्यतया एउटा इमेल समावेश हुन्छ, सामान्यतया तपाइँसँग परिचित कम्पनी वा साइटबाट, तपाइँलाई अर्को वेबसाइटमा लैजाने लिङ्कमा क्लिक गर्न सोध्ने। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई लग इन गर्न भनिन्छ, र अपराधीहरूले तपाइँको प्राप्त गर्छन् डाटा यसलाई अन्य अपराधी वा स्क्यामरहरूलाई बेच्न तयार छ। यदि तपाईंले लग इन गर्नुभएन भने, त्यहाँ त्यस साइटमा बस्ने कुनै कारण नहुन सक्छ र तिनीहरूले तपाईंको डाटा मेटाउन र तपाईंको खाता बन्द गर्न सक्छन्।
3. फिसिङ भनेको तपाईंको पैसा चोर्ने तरिका हो
फिसिङ आक्रमणहरू एक बढ्दो प्रवृत्ति हो, धेरै मानिसहरू हरेक दिन अनलाइन घोटालाहरूको सिकार भएका छन्। फिसिङ साइबर अपराधको एक रूप हो जसमा बैंक, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, सामाजिक संजाल साइट, वा अन्य इ-मेल प्रदायक व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्न प्राप्तकर्तालाई छल गर्ने प्रयासमा। तपाईंले सामना गर्नुहुने सबैभन्दा सामान्य प्रकारका फिसिङ इमेलहरू ती हुन् जुन एकबाट वैध इमेल जस्तो देखिन्छ। बैंक, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, वा सामाजिक मिडिया साइट।
4. फिसिङ एक अस्पष्ट प्रयोगकर्ताबाट तपाइँको बैंक जानकारी प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको नाताले, तपाईंले आफ्नो जीवनमा विभिन्न प्रकारका घोटालाहरू र फिसिङ आक्रमणहरूको सामना गर्नुभएको हुनुपर्छ। यी आक्रमणहरू ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूका लागि, विशेष गरी अनलाइन बैंकिङ जस्ता सक्रिय अनलाइन उपस्थिति भएकाहरूका लागि प्रमुख उपद्रव बनेका छन्। फिसिङ आक्रमणको शिकार हुनबाट बच्नको लागि, तपाईंले आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ।
5. फिसिङ तपाईंको बैंक खाताबाट पैसा चोर्न प्रयोग गरिन्छ
फिसिङ आक्रमणहरू ह्याकरहरूका लागि मानिसहरूको वित्तीय जानकारी चोर्ने लोकप्रिय तरिका हो। यी घोटालाहरू मध्ये धेरै जसो इमेलहरूबाट सुरु हुन्छ, जुन आधिकारिक देखिने कागजातहरू जस्तै देखिन्छ, तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईंको खाता त्रुटिमा लक गरिएको छ, र तपाईंले यसलाई अनलक गर्न लिङ्क क्लिक गर्नुपर्छ। यी इमेलहरू प्राय: बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट आउँछन्, र तपाइँलाई तपाइँको खाता प्रमाणित गर्नको लागि लिङ्कमा क्लिक गर्न सोध्छन्, जसले तपाइँलाई नक्कली वेबसाइटमा लैजान सक्छ।
6. फिसिङ प्रयोग गरिन्छ कि तिनीहरू आफ्नो पैसामा पहुँच प्राप्त गर्न आधिकारिक खाता धारक हुन् भनी बहाना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
फिसिङ आक्रमणहरू अपराधीहरूद्वारा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीमा पहुँच प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। ह्याकरहरूले तपाइँलाई तपाइँको पासवर्ड र अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट गर्नका लागि एक वैध वेबसाइट, बैंक, वा अन्य संस्था भएको बहाना गर्छन्।
यदि तपाइँ पीडित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने तुरुन्तै नजिकै रहेको प्रहरी अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्!
निष्कर्षमा, घोटाला गर्नेहरूले तपाईंलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको बहाना गरेर तपाईंको पैसाबाट धोका दिने प्रयास गर्छन्। फोन वा इमेल यस घोटालाको शिकार हुनबाट जोगिनका लागि अधिकारीहरूलाई तुरुन्तै कुनै पनि फिसिङ प्रयास रिपोर्ट गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग यो हुन्छ भने, तपाइँको कथा शेयर गर्न वा भन्न नडराउनुहोस्।नयाँ दैनिकी बाट
दक्षिण कोरियामा बिरालोका कारण १०० बढी घरमा आगलागी